Home » News » IMT Vislink na SpacePath Co-Exhibitions na AfricaCom 2018
IMT Vislink na SpacePath Co-Exhibitions na AfricaCom 2018
CAPE STOWN, SOUTH AFRICA, NOVEMBER 7, 2018 - xG® Technology, Inc. ( "XG") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), ndi amara aha ya dika ndi isi uwa n'oru mgbasa ozi di n'ime mgbasa ozi, ndi agha na ndi gomenti, na-ekwuputa na IMT Vista ahia ya na-etinye aka na SpacePath na AfricaCom (Ụlọ Nzukọ 4, Stand F21), ihe kachasị mkpa na nkà na ụzụ na telivishọn na kọntinent. IMT Vislink na-egosipụta MSB-120 ya satellite vidiyo na data data na ViewBack dị ala abụọ na-echekwa di iche iche na-anata-decoder, ebe SpacePath na-egosipụta ụdị dị elu nke ike (HPAs) na ala-ike siri ike amplifiers (SSPA / SSPBs).
"AfricaCom na-ezukọta gburugburu ndị bịara 14,000 bụ ndị nwere mmasị n'ichepụta njikọta, teknụzụ mmeghasị, ọrụ ntanetị na atụmatụ ICT, nke na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ihe ngosi maka anyị iji mee ka anyị mata satellite ngwaahịa maka ndị ọkachamara n'ahịa ụlọ ọrụ, "ka David Robins, Global Sales Director maka IMT Vislink kwuru. "Vislink nwere aha ogologo oge dịka onye na-eweta ụwa satellite teknụzụ nkwukọrịta na mmelite ndị ọhụrụ na nso nso a, na-aga n'ihu na-enye ngwọta dị iche iche, ngwọta na ọnụ ahịa dị irè maka ahịa a. Site n'iji SpacePath na-egosipụta, anyị ga-enwe ohere iji gosipụta onyinye ngwaahịa anyị na ngwaahịa anyị n'ime MSAT-120 anyị biara. satellite Ọnụ."
Na biakwa obibia MSAT-120 bụ nnọọ obere, obere, na-agbakọ satellite okwu nke nwere ike ịmebe ebe ọ bụla iji nyefee data na nnyefe vidiyo na obere oge nkeji ise. Ọ na-akwado nhazi X-, Ku na nke Ka-band na-eme ka mkpuchi zuru ụwa ọnụ dị na mgbe niile. A na-enweta ya na 65, 90 ma ọ bụ 120cm reflector, e mepụtara usoro ahụ maka nkwụsị ngwa ngwa na ọnọdụ mmegide ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ batrị.
Debanye na MSAT-120 biara, SpacePath's 60W 13.75-14.50GHz SSPA ga-egosiputa na ngosi. Ọzọkwa, SpacePath ga-agbalite ihe ọhụrụ 12W 13.75-14.50GHz Fanless SSPB. Ebe ọ bụ na enweghị Fans na-arụ ọrụ ahụ, SSPB ọhụrụ ahụ na-enweghị mmasị na-eme ka akụkụ ahụ dịkwuo ogologo oge ma na-ebelata mkpa ọ bụla maka ịrụzi mgbe niile. Oghere SpacePath nke nnukwu ike na ala-ike ike steeti ike amplifiers, nke gunyere ndị agha dịka C, Ku, DBS na Ka ga-egosiputa.
"Ihe omume a na-enye anyị ohere pụrụ iche iji gosipụta ọhụrụ anyị satellite ngwaahịa na usoro ntinye aka na mpaghara, "ka Colin Bolton, Director na SpacePath Communications na-ekwu. "Mmekọrịta anyị na IMT Vislink na-eme ka nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ sitere na òtù abụọ ahụ dị."
The Vislink ViewBack bụ ihe dị mfe, obere-ike, dị ala, ụyọkọ di iche iche na-anata ihe, bụ nke a na-ebute iji nweta nnyefe nke nnyefe vidiyo na-agaghachi na onye ọrụ igwefoto. Na-arụ ọrụ na bandịlị ikikere 2GHz, onye natara ahụ na-akwado nkwado LMS-T nke Rudlink nke ọma na mgbakwunye na mkpebi nlezigharị H.264. Ntinye gụnyere HDMI na HDSDI, nke a na-agagharị, na ngwa ikuku kamera, n'etiti vidiyo igwefoto mpaghara na nloghachi natara video.
Maka ama ndi ozo banyere IMT Vista na SpacePath, kwusi site na iguzobe F21 na AfrikaCom ma obu bia www.imt-solutions.com, www.vislink.com/ or www.space-path.com/.
xG Technology si ụdị enye wireless video ngwọta na ohuru, na ndị mmanye iwu na-agbachitere na ahịa, na onwe mobile brọdband netwọk maka ojiji na ịma aka gburugburu. xG si ika Pọtụfoliyo agụnye Integrated Microwave Technologies (IMT), Vislink na xMax.
IMT na Vislink bụ ndị na-ebute ụzọ nke usoro ntanetịime dijitalụ dijitalụ iji kpochapụ, na-ezipụ ma na-achịkwa nchebe, elu, na vidiyo vidio. IMT na Vislink bụ ndị a na-atụkwasị obi na ndị ahịa ụwa na-agbasa ozi ọma na mgbasaozi / egwuregwu / ntụrụndụ, na ndị mmanye iwu / nchekwa ọha na eze / nchebe. A na-amata ngwaahịa ha maka ọkwa dị elu nke arụmọrụ, nke a pụrụ ịdabere na ya, iwuli mma, ogwe ọrụ ndị dị na kọmpat ihe. N'elu mgbasa ozi, egwuregwu na ntụrụndụ ndị ọzọ, IMT na Vislink na-enye njikọ nkwukọrịta dị elu iji jikọta ma kesaa ihe nkiri ndụ. Na ndị mmanye iwu, nchekwa ọha na eze & ụlọ ahịa na-agbachitere, IMT na Vislink na-enye ozi ntanetị dị nchebe na ngwọta dị egwu na mpaghara, mba na mba na mba dị iche iche. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ na www.imt-solutions.com na www.vislink.com.
xMax bụ a ala, ngwa ngwa-idokwa mobile brọdband usoro na-anapụta ozi-obi ike wireless Njikọta na-achọ na-arụ ọrụ na gburugburu. xMax e kpọmkwem iji na-eje ozi dị ka onye expeditionary na oké egwu nkwukọrịta network maka ojiji na-ejighị n'aka ndapụta na n'oge ọmụmụ ọnọdụ. Nke a na-eme ka ya a gbara ọkpụrụkpụ ngwọta maka ọdachi nzaghachi, mberede nkwukọrịta, na-agbachitere ngwa. More ọmụma banyere xMax nwere ike na www.xgtechnology.com/system-overview/. Na mgbakwunye na n'elu azụmahịa edoghi, xG nwere a raara onwe ya nye Federal Sector Group (xG Federal) lekwasịrị anya enye ọzọ-ọgbọ ụdịdị dị iche iche nkekọrịta ngwọta na mba-agbachitere, nnyocha sayensị na ndị ọzọ na gọọmenti etiti òtù. Na ozi ndị ọzọ banyere xG Federal nwere ike na www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Dabere na Sarasota, Florida, xG Technology nwere n'elu 100 nchọpụta Kemịkalụ na rue mgbe patent ngwa. xG bụ a n'ihu ọha ahịa ụlọ ọrụ depụtara na NASDAQ Capital Market (akara: XGTI) Maka ozi ọzọ, biko gaa na www.xgtechnology.com.
Cautionary Nkwupụta Banyere Forward N'ileghachi Nkwupụta
Nkwupụta ẹdude n'ime ebe a na-adịghị dabere na ugbu a ma ọ bụ ndị mere eme na-atụ-na-na-achọ na ọdịdị na-emekwa-atụ-na-achọ okwu n'ime ihe Nkebi 27A nke Securities Act of 1933 na Nkebi 21E nke Securities Exchange Act of 1934. Ndị dị otú ahụ na-atụ-na-achọ okwu na-egosipụta Company na-atụ anya banyere ọdịnihu ya ga-arụ ọrụ results, arụmọrụ na ohere na-agụnye ọkpụrụkpụ dị ize ndụ ma na-ejighị n'aka. Okwu a na-agụnye ma na-ejedebeghị na okwu banyere ahụ bu n'obi okwu nke àjà, na-emechi nke àjà na ojiji nke ọ bụla wee si na àjà. Mgbe e ji n'ime ebe a, okwu "na-atụ anya," "kwere," "na-eme atụmatụ," "na-abịa," "plan," "lekwasịrị", "bu n'obi" na "na-atụ anya" na okwu ndị yiri, dị ka ha na-emetụta xG Technology, Inc. , ya enyemaka, ma ọ bụ ya management, na-aduak mata ndị dị otú ahụ na-atụ-na-achọ okwu. Ndị a na-atụ-na-achọ okwu dabeere na ozi ugbu a na Company na bụ isiokwu a ọnụ ọgụgụ nke ihe ize ndụ, na-ejighị n'aka, na ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ndị Company kpọmkwem results, arụmọrụ, na atụmanya, na ohere dị iche ihe onwunwe ndị na-egosipụta n'ụzọ, ma ọ bụ echiche site, ndị a na-atụ-na-achọ okwu.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering IMT Vislink Ụgha & Akụrụ video Engineer	2018-11-07
Previous: Nhazi Mgbasa Ozi Ngwọta Ike New LG U + Ntụrụndụ Enyele "Ihe Gosi"
Osote: Injinia Ngwaahịa